विष्णु पौडेललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी ! – Life Nepali
विष्णु पौडेललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी !
काठमाडौं, २७ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने र उनीहरुको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ ।स्रोतका अनुसार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय समाल्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।
थप समाचार : यी हुने भए ओली सरकारका नयाँ मन्त्रि !
Previous पुराना मन्त्रि हटाएर : यी हुने भए ओली सरकारका नयाँ मन्त्रि हेर्नुहोस् !
Next बिजुलीमा राजनीति : कांग्रेसका घर झिलिमिली, नेकपा घरमा अ’न्धकार ! पानी बाराबारको स्थिति !